Zaka tsara : efa hita ny vita | NewsMada
Zaka tsara : efa hita ny vita
Hanao ahoana ny fikasana na amboletra hanao fitsapan-kevi-bahoaka hanitsiana ny lalàmpanorenana? Na ny fanovana tanteraka ny lalàmpanorenana ho amin’ny fanorenana ifotony, na ny fifidianana filoham-pirenena; eny; na fampihavanam-pirenena aza. Misy ny manahy fa hiverina indray ny krizy, na inona hatao.
Kajikajy sy paipaika tombontsoa tsinona no zava-dehibe mahamaika ny sasany. Resaka tian-kateza ihany ny hoe fikatsahana fahamarinan-toerana sy fitoniana politika. Eny, na izay hoe fahamarinan-toerana sy fitoniana politika izay aza, mbola tombontsoa manokana ihany. Hahazoana manao ny danin’ny kibo hatrany?
Tsy hita tsinona izay tena asa fampandrosoana, fijerena ny tombontsoam-bahoaka… Vokany, na inona atao sy lazaina: ahina ho misy ambadika avokoa amin’ny tsy fahatokisana intsony, fa efa hita ny vita. Efa manomboka mijinja izay nafafy izay ela izay izao? Na mandray ny fitsarana sy ny valin-kafatry ny vahoaka… tsy matoky.